Google Na-achọ Ndị Ọrụ Niile Na-alọghachi na Ọfịs Ka Ha Ghaa Ya
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Google Na-achọ Ndị Ọrụ Niile Na-alọghachi na Ọfịs Ka Ha Ghaa Ya
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ahụike • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Technology • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Onye isi oche Google Sundar Pichai
Google bụ ụlọ ọrụ nzuzo kachasị ukwuu ruo ugbu a iji mee ka ịgba ọgwụ mgbochi COVID-19 bụrụ iwu maka ndị ọrụ ya.
Onye ọ bụla na -abịa ịrụ ọrụ na ogige Google ga -achọ ịgba ọgwụ mgbochi.
A ga -atụpụ amụma a na US n'izu ndị na -abịa, yana ụwa niile ka emechara.
Onye isi ala Joe Biden kwuru na 'a na -atụle ọgwụ mgbochi maka ndị ọrụ gọọmentị US' ugbu a.
Ụlọ ọrụ nkà na ụzụ nke mba America Google LLC ekwuputala na ndị ọrụ ya niile na-alaghachi ọrụ na ogige ya ga-etinye ọgwụ mgbochi COVID-19.
Na mbido oria ojoo COVID-19, Google zigara ọtụtụ n'ime ndị ọrụ ya ruru 140,000 n'ụlọ na Machị gara aga ka ha rụọ ọrụ n'ime ime obodo. Agbanyeghị ugbu a, ogige Google na -amalitegharị, ndị ọrụ ga -alaghachi n'ọfịs, mana naanị mgbe agbachara ha ọgwụ mgbochi, CEO Sundar Pichai gwara ndị ọrụ Google na email taa.
Pichai dere, sị, "Onye ọ bụla na -abịa ịrụ ọrụ na ogige ụlọ akwụkwọ anyị ga -achọ ịgba ọgwụ mgbochi,"
Ndị ọrụ na-achọghị ịlaghachi n'ọrụ mmadụ ga-enwe ike ịrụ ọrụ site n'ụlọ ruo Ọktoba, ọ gara n'ihu, ụlọ ọrụ ahụ ga-ahapụkwa ụfọdụ ndị ọrụ ka ha rụọ ọrụ site n'ụlọ ruo na ngwụcha afọ.
Google bụ ụlọ ọrụ nzuzo kachasị ukwuu ruo ugbu a iji mee ka ndị ọrụ ya bụrụ ọgwụ mgbochi, mana gọọmentị US niile nwere ike ịgbaso ya n'oge na -adịghị anya.
Mkpebi Google na -abịa dị ka Onye isi ala US Joe Biden na -eme atụmatụ maka ndị ọrụ gọọmentị etiti niile.
Biden gwara ndị nta akụkọ na Tuesday na 'a na -echebara ọgwụ mgbochi maka ndị ọrụ gọọmentị ugbu a,' na akụkọ mgbasa ozi na -egosi na ọkwa banyere isiokwu ahụ nwere ike ịbịa n'oge Tọzdee.
Ma o doro anya na Biden na Google nwere ikike ịrịọ ndị ọrụ ha ka ha tigbuo ha. Ntụle nke Ngalaba Ikpe Ziri Ezi kwubiri n'izu a na ụlọ ọrụ onwe na nke ọha nwere ike nye ndị ọrụ iwu ka ha gbaa ọgwụ mgbochi.
Agbanyeghị, Google nwere ọfịs na mba iri ise n'ụwa niile, enwere ike itinye ihe ịma aka nke iwu megide ọgwụ mgbochi ọgwụ na ụfọdụ ebe ndị a. Email Pichai kwuru na ikike a “ga -adịgasị iche dabere na ọnọdụ na ụkpụrụ mpaghara,” n'agbanyeghị na enyeghị nkọwa ndị ọzọ.
N'oge na -adịghị anya ka okwu Pichai gasịrị, Netflix mara ọkwa na ọ ga -achọ ka ndị niile na -eme ihe nkiri na -arụ ọrụ na mmepụta ya na US, yana ndị ọrụ ha na ha na -akpachi anya, gbaa ọgwụ mgbochi.